I-Clicker yezinja: iyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani ukuqeqesha isilwane sakho | Izinja Umhlaba
Abaqeqeshi abaningi bezinja, ngaphezu kwabanikazi bezilwane, basebenzisa i- chofoza inja njengesisekeli lapho ufundisa amaqhinga noma isimilo esifanele kumngani wethu onemilenze emine. Kodwa-ke, kunezinhlobo ezahlukahlukene emakethe futhi ukuthola okufanele kakhulu, uma ungaqiniseki ukuthi kuyini, kungaba nzima.
Ngakho-ke, ngezansi asizokhuluma kuphela ngokuthi i-clicker yezinja iyini, kepha nokuthi siyisebenzisa kanjani, yiziphi izinhlobo ezikhona nokuthi isebenza yini kunoma iyiphi inja. Funda ukuze uthole futhi.
1 Kuyini ukuchofoza inja futhi kwenzelwa ini?
2 Izinhlobo zokuchofoza izinja
2.2 Ngempempe yempendulo
2.3 Ngomsindo omkhulu
3 Ungayisebenzisa kanjani i-clicker ukuqeqesha inja
4 Ingabe ukuchofoza kusebenza ukuqeqesha inja?
5 Ungathenga kuphi ukuchofoza inja
Kuyini ukuchofoza inja futhi kwenzelwa ini?
I-Arquivet Clicker Black ...
I-OYEFLY Clicker ye...
Empeleni, kunezindlela eziningi zokuchaza ukuthi iyini i-Clicker yenja, kepha enye yezinto ezilula ukuyiqonda yile: ibhokisi elincane lepulasitiki okuthi, lapho licindezelwa, elikwenzayo kuzwakale njengokuchofoza, yingakho igama. Le divayisi isetshenziselwa ukuqinisa ukufunda okuhle, uhlobo lomsindo olukhonjiswa yinja lapho yenze okuthile okuhle.
Kodwa-ke, ingasetshenziswa nangendlela engemihle, okungukuthi, njengokuphindisela, ukuqonda ukuthi inja lapho izwa umsindo iyazi ukuthi kukhona okungahambi kahle, okudala ukuthi icindezeleke, itatazele futhi ingenze ngendlela engeyinhle.
Izinhlobo zokuchofoza izinja
Emakethe, lapho uyobheka i-clicker yezinja, uzothola izinhlobo zazo, futhi ukukhetha eyodwa efanelekayo kungakwenza uphumelele nenja yakho noma uyibone njengenye ithoyizi.
Ngakho-ke, phakathi kwalezo ezikhona kukhona:
I-ASCO Premium Clicker, ...
Ugxile kubaqeqeshi bezinja nabaqeqeshi. Lolu hlobo lokuchofoza izinja yi- yenziwe ngento eqinile futhi eqinile ukuvimbela ukusetshenziswa kwayo njalo emsebenzini ekugqokeni phansi.
Chofoza i-2in1 kanye ne-Whistle...
Lolu hlobo lokuchofoza inja lune- umsebenzi ombaxambili. Futhi ukuthi ayinayo kuphela inkinobho ethi "chofoza" kepha ungaphinda ushaye nekhwela ngayo ukuze isilwane siye noma sikhuze ngesizathu esithile.
Izinja ezidideka kalula, noma lezo esezindala noma ezinenkinga yokuzwa, lezi yizona ezelulekwa kakhulu, ikakhulukazi ngoba umsindo eziwukhipha uphezulu kakhulu.
Yenziwe ngepulasitiki elukhuni kepha enemibala, kungaba inketho yokufanisa isilwane osifundisayo. Uma futhi unezinja ezimbili noma ngaphezulu, ungaba nenye yazo ngayinye (ngoba, yize zonke zenza umsindo ofanayo, kwesinye isikhathi kunomehluko phakathi kwazo).
Isikhwama sikaswidi se...
Kubonakala ngokuba yinto encane enenkinobho emaphakathi. Ngabe ukuma okusaqanda ukuze silingane kangcono isandla ngendlela yokuthi ukwazi ukuyifihla ukuze inja ingayitholi.
Ungayisebenzisa kanjani i-clicker ukuqeqesha inja
Ukuze usebenzise i-clicker yezinja, into yokuqala oyidingayo ukwazi ukuthi uzoyisebenzisa kanjani, uma iyinhle noma iyimbi. Uma kwenzeka inegethivu, igama elingukhiye elizohambisana nomsindo ngeke lithi NO, ukuze ukhombe lowo msindo nokuthile okungafanele ukwenze.
Kunalokho, Uma kuyinto enhle, kufanele uqale uchaze ukuthi kuzoba yini. Isibonelo, ukuthi kunjani.
Lapho usukhethe ukuqeqeshwa, kufanele ugxile kulokho kuphela bese ukhetha igama okuthi, uma likusho, inja iyaqonda ukuthi kukhona okumele ikwenze. Ngakho-ke, hlala, hlala noma uhlale ezinye zabakhethiwe. Kepha hhayi kuphela. Khumbula ukukhetha eyodwa ongayisebenzisi njalo ukuze ungayididanisi.
Manje, kufanele umcasule enze lokho okufunayo, okungukuthi, ukuzwa. Lokhu ungakufeza, ngokwesibonelo, ngokumenza abuke emoyeni amphoqa ukuba ahlale phansi ukuze uqhubeke ubuke into. Ngaleso sikhathi, yisho igama bese uchofoza okokuchofoza.
Ngeke aliqonde okokuqala, kepha uma ulwenza kaningana uzobona ukuthi kunobudlelwano phakathi kwegama, umsindo nalokho elikwenzayo, futhi kuzogcina kulwenza luzenzekele, ngaphandle kwesidingo senja ngokuchofoza.
Ingabe ukuchofoza kusebenza ukuqeqesha inja?
Cabanga indlela yokufundisa. Iqukethe uchungechunge lwezenzo okuthi, ngokusho kwedatha ehlaziyiwe, zisebenze ezinganeni. Kepha konke kusebenza ngendlela efanayo? Ngabe bonke bafunda ngokufanayo? Iqiniso ukuthi cha.
Kulungile lokho kwenzeka ngokuchofoza kanye nenja. Zonke izilwane zehlukile: ubuhlakani bakhe, ubuqili bakhe, njll. Benza kube isesekeli esisebenziseka kakhulu ukuxhumana nesilwane sakho bese usifundisa okufunayo. Kepha kwezinye izikhathi akusebenzi.
Okucacayo wukuthi baningi abaqeqeshi abakubona kuyimpumelelo ukuqeqesha inja. Kepha kuzoba nezilwane ezingasabeli kulolu hlobo lwesikhuthazi futhi kufanele ufune ezinye.
Kulokhu, nguwe owazi inja yakho kangcono. Uma ucabanga ukuthi ingamukela lezi zinto, ngaphandle kokungabaza ukuthi ukuchofoza izinja kungakusiza ukuthi unciphise isikhathi soqeqesho ngokwengeziwe, ngoba izofunda ngokushesha. Ngaphandle kwalokho, kungcono ukwenze ngaphandle kwayo bese uthola okuthile okungakusiza ugxile futhi uhlanganise lokho ofuna ukukufundisa.
Ungathenga kuphi ukuchofoza inja
Uma ngemuva kwakho konke esikutshele khona, ukubheka lokho udinga i-clicker yenja yakho, bese siphakamisa ezinye izitolo lapho ungazithenga khona.
Amazon: Kungenxa yalapho uzothola khona ukuhlukahluka okuningi, kokubili ekwakhiweni nangosayizi nomumo. Izintengo zabo nazo azilingani, ezivumelana nanoma isiphi isabelomali.
kiwiko: Njengesitolo sezilwane esikhethekile, i-dog clicker ingesinye sezesekeli zezinja ongazithenga. Ayinayo imikhiqizo eminingi, kepha inokwanele ukuthola okulungile ngokusho nokusetshenziswa kwenja.
Tendenimal: Esinye sezitolo zezilwane ongasivakashela ukuthenga i-dog clicker yiTíanimal. Kuyo uzothola izinhlobo ezimbalwa zemiklamo nemiklamo, abathengisi abahamba phambili futhi abathandwa ngabasebenzisi.
zooplus: KuZooplus ngeke uthole ukuhlukahluka okuningi, ngoba ikhathalogi yayo ilinganiselwe kakhulu. Kepha lezo abanazo yilezo abantu abavame ukuzithenga, ngakho-ke uyazi ukuthi isetshenziswa kabanzi.
Esandleni sakho manje ukhetha ukuchofoza izinja noma khetha olunye uhlobo losizo ekuqeqesheni nasekuqeqesheni i-canine.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » I-Clicker yezinja
Umbhede wezinja ophakanyisiwe